KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Xeefoow: Shacabka waa inay Go’aan midaysan ka qaataan Dastuurka Cusub
Xeefoow: Shacabka waa inay Go’aan midaysan ka qaataan Dastuurka Cusub
MUQDISHO (Keydmedia) - iyadoo Mudooyinkan danbe uu sii xoogaysanayo diidmada ay Shacabka Soomaaliyeed ka muujinayaan Datuurka Cusub ee dhowaan Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Gaas ay sheegtay in la dhamaystiray ayaa waxaa ka hadlay Arrimahaasi Ururka Ahulusuna Waljamaaca.
Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefoow oo ah Guddoomiye ku xigeenka Golaha fulinta ee Ururka Ahulusuna oo la hadlay Warbaahinta ayaa wuxuu si kulul uga hadlay Dastuurka dhawaan ay sheegtay inay dhamays tirtay Xukuumadda KMG Soomaaliya laguna ansixin doono Magaalada Muqdisho.
Guddoomiye ku xigeenka Golaha fulinta ee Ururka Ahlusuna Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefoow ayaa sheegay in Dastuur uu yahay kii Lixdankii islamarkaana uusan garanayn u jeedada keentay in Dastuur cusub iminka la sameeyo.
Wuxuu sheegay in Bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay Go’aan cad ka qaataan Arrimaha Dastuurkan cusub ee Xukuumadda ay sheegtay in la dhameestiray iyadoo Dowladii Dhexe ee dalka Dastuurkii ay samaysay uu jirana iminka mid cusub la sameeyo waxa keenay ayuu sheegay Sheekh Maxmed Yuusuf Xeefoow in uusan garanayn.
Tan iyo markii Xukuumadda KMG Soomaaliya ay shaacisay in la dhameestiray Dastuurka qabyo qoraalka ah ayaa waxaa soo badanayay qeylo dhaan ka soo yeeraysa qeybaha kala duwan ee Shacabka Soomaaliyeed, taasi oo ku aadan Arrimaha Dastuurka, kaasi oo Qodobada ku jira qaar ay yihiin kuwa kasoo horjeeda Diinta Islaamka iyo Dhaqanka Soomaaliyeed.